Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami? - Print Peppermint
January 19, 2022 | Umklami we-graphic, Ngiyazisebenza, Students
Umthombo wesithombe: jobiano.com
Abaklami bezithombe babamba indima enkulu kakhulu emhlabeni wedijithali ngoba badala izithombe ezibukwayo ezimangalisayo ezibonwa nsuku zonke, umzuzu nomzuzu, emhlabeni wonke. Laba bantu bakha ezokuzijabulisa, ukukhangisa, izindaba, nezici ngazo zonke izinhlobo, okuhlanganisa imidiya yokuphrinta nedijithali efana nemidlalo yaseshashalazini, umabonakude, iziphequluli zewebhu, nezinkundla zokuxhumana.
Nakuba, ukufunda idizayini ekolishi ngeke kukulethele amakhono okusebenzelana namakhasimende, izinsuku zokugcina kanye nezimo ezicindezelayo, kungase kukunikeze isisekelo esihle sethiyori. Uma wesaba ukufunda ekolishi kuzokuthatha sonke isikhathi sakho ukulungiselela izabelo zokubhala ezinde ungahlala u-google into efana nale khokhela othile ukuthi abhale iphepha lami locwaningo ukuze uzitholele usizo lochwepheshe futhi ugxile kakhulu ekuklameni.
Noma ukuya ekolishi kungakunikeza amakhono neziqu ozidingayo, usengaba umdwebi wezithombe ngaphandle kokuhamba umzila ojwayelekile wokuthola iziqu.
Yini engaqinisekisa ukuthi umuntu owanquma ukuba umklami angaphumelela kulo msebenzi?
Okokuqala, yiqiniso, isifiso esikhulu, ngaphandle kwalokho akufanelekile ukuqala. Ibhaluni belingeke likhuphuke uma Abazalwane baseMontgolfier akazange akufise. Okwesibili, ulwazi oludingekayo namakhono. Okwesithathu ukukhuthala nethalente. Kodwa ngabe idiploma inganikeza noma yiziphi iziqinisekiso? Lona umbuzo onzima kakhulu, futhi nakhu ukuthi kungani.
Esinye sezici zokuqeqeshwa komsebenzi womklami yinani elikhulu lezinhlelo zokuqeqesha, ezihluke kakhulu ngobude, ukujula, ikhwalithi yokuqeqeshwa kanye nediploma oyitholayo ekupheleni kokuqeqeshwa. Okwamanje awekho amazinga emfundo afanayo omsebenzi wokuklama, okwenza kube nzima kakhulu ukukhetha.
Umthombo wesithombe: thebalancecareers.com
Umklami wezithombe udinga ukufunda indlela yokudlulisa izithombe ezidalwe ekhanda lakhe esikrinini semonitha yakhe esebenzayo. Ngakho-ke, kufanele wazi izinhlobo zamasu obuciko, imithetho yokudala ukwakheka, ube ne-arsenal egcwele yolwazi namakhono omdwebi wangempela. Ngaphezu kwalokho kuzomele uphathe kahle imithetho yokusebenzisa inqwaba yezinhlelo zekhompiyutha, abahleli bezithombe. Konke lokhu okungenhla kungafundwa. Into esemqoka ukuthi ungalokothi ume lapho, ngoba uhlu lwamathuluzi ochwepheshe lukhula njalo.
Kunenani elikhulu lezinhlelo zemfundo, ukuqeqeshwa, izifundo namasemina emakethe yezinsizakalo zemfundo. Asazi ukweluleka ukulengiswa endleleni eyodwa, kodwa kungcono ukuzama ukuhlanganisa nokufunda ngezindlela ezahlukene kanye nezikole. Ngale ndlela ungakwazi ukwandisa amathuba akho okuthola umsebenzi wamaphupho akho.
Umthombo wesithombe: freecodecamp.org
Njengoba kunzima kakhulu ukuhlola ukusebenza kohlelo lokuqeqesha ngokombono womfundi, asikho isiqiniseko sokuthi uma usuthweswe iziqu, uzoba yimpahla ebalulekile emakethe yezemisebenzi. Kungakho abaklami abaningi abasebasha abaphumelelayo abanayo nhlobo imfundo yephrofayili, futhi baqonda ubuhlakani bomsebenzi bebodwa.
Uma kunikezwe lokhu okungenhla, ukuzifundisa kuyindlela enhle yokuklama izikole. Nokho, kunesinye isizathu sokungachithi isikhathi nemali ngothisha. Embonini yokuklama, izinto zishintsha ngokushesha kakhulu. Izinhlelo zokuqeqesha ezisemthethweni azihlali zihambisana namathrendi akamuva emakethe. Ngokufunda ukuklama uwedwa, ungagxila kulokho okufanelekile kanye nokufunwayo njengamanje.
Umthombo wesithombe: cgway.net
Kunezinhlelo ezahlukene zokuklama
Muva nje, kuye kwavela izifundo eziningi ezihlukahlukene, izikole, ngisho namakolishi akhiqiza inqwaba yabaklami bamazinga ahlukahlukene "okulungela" kangangokuthi imakethe ayikwazi ukunikeza wonke umuntu umsebenzi othakazelisayo. Ngaphezu kwalokho, izinhlelo eziningi zokuqeqesha azinikezi amakhono anele ukuze abathweswe iziqu bathathwe njengabaklami abangochwepheshe. Njengomthetho, kuyinkolelo, engafaneleki ngisho nesenti ngaphandle komkhuba wokuxhumana nekhasimende langempela. Ngeshwa, iningi lezinhlelo zokuqeqesha azibandakanyi i-internship, futhi ngenxa yalokho, abafundi benza amaphrojekthi asekelwe kuphela kumqondo wabo wokunambitha nesitayela. Ngenxa yalokho, abaqashi babhekene neqiniso lokuthi ngisho nokuba nephothifoliyo enhle akuqinisekisi ukuthi umklami uzosebenza ngokuphumelelayo endaweni "yokulwa".
Umthombo wesithombe: thriveglobal.com
Yini okufanele umklami akwazi ukuyenza?
Umklami oqeqeshiwe kufanele abe nesethi yamakhono ayisisekelo angavamile ukuba yingxenye yohlelo lokuqeqeshwa olusemthethweni.
Okokuqala, yikhono lokwakha nokuveza imibono ngendlela efanele futhi ecacile ukuze noma yiliphi ikhasimende likwazi ukuyiqonda, futhi lapha ukukhanga komuntu siqu namakhono okuxhumana adlala indima ebalulekile.
Ngaphandle kwekhono lokudweba ngepensela, echaza ngombala ukuthi izobukeka kahle kangakanani, kufanele ukwazi ukuqinisekisa amazwi akho ngezenzo futhi uguqule le midwebo ibe iphrojekthi egcwele, ehlangabezana ngokugcwele nokulindelwe yikhasimende.
Nakuba kungase kuzwakale kuwubuphukuphuku, uma kucatshangelwa umbono wokuthi bonke abaklami bangabantu abangahlelekile neze, umklami ochwepheshe kufanele akwazi ukuhlela amaphrojekthi abo futhi abe nokucabanga okujulile. Lokhu kusebenza kukho kokubili isikhathi nokubeka kuqala. Uma kungenjalo, kunobungozi bokugxila emisebenzini futhi kuphazamise zonke izinsuku zokugcina, okuzoba nomthelela omubi esithunzini. Ungase ubhekane neminye imisebenzi yokubhala lapho uklama. Uma kuthatha isikhathi sakho esiningi vele ubheke isevisi yokubhala engcono kakhulu futhi wonge isikhathi sakho sokuklama.
Kunombono oyiphutha wokuthi umklami omuhle wezithombe ngumuntu odweba izithombe ezinhle. Eqinisweni, umklami wezithombe kufanele anikeze isisombululo esinesithombe esisebenzayo ngokwezentengiselwano emsebenzini. Kumele akwazi ukubheka iphrojekthi ngokucophelela, futhi enze umyalo ngokuhambisana nezidingo kanye namazinga embonini, kuyilapho ecabangela umbono wokuthuthukiswa. Lokhu kungafaniswa namakhono okudweba kusuka ekuphileni, lapho ukuze adwebe isandla ngendlela efanele, umdwebi kufanele azi i-anatomy yomuntu: ukucabanga ukuthi imisipha itholakala kanjani ngaphansi kwesikhumba, futhi yiziphi amathambo ezinamathele. Uma kungenjalo, umdwebo ngeke unembile.
Umthombo wesithombe: coursera.org
Ungawenza kanjani kahle umsebenzi womklami wezithombe ngokwakho?
Kunjalo, uma unengqondo yokudala kanye nomuzwa wobuciko, ungakwazi ukuba yingcweti yobungcweti bomklami wezithombe ngokwakho. Ukwenza lokhu, kwanele ukuba umuntu ohlelekile futhi ogqugquzelekile. Ngakho-ke ungaqala kuphi?
Bheka labo asebekwazi
Okokuqala, noma ubani ofuna ukunikela ukuphila kwakhe ekuklameni kufanele aqonde ukuthi ukuklama kumayelana nokuxazulula izinkinga, hhayi “ukudweba kahle. Ukuqonda umsebenzi weklayenti nokuthi izethameli zizosebenzisana kanjani nomphumela womsebenzi wakho kuyikhono elibalulekile lomklami wangempela. Funda amaphothifoliyo ama-ejensi amakhulu wokukhangisa nabaqambi, abavame ukukhombisa umphumela wokugcina kuphela, kodwa futhi nenqubo yokusebenza kuphrojekthi ngencazelo yemisebenzi kanye nengqondo yokucabanga.
Naphezu kweqiniso lokuthi i-graphic design ikhona ingxenye enkulu endaweni yedijithali, awukwazi ukukhohlwa izisekelo zobuciko bendabuko. Ukwakheka, umbono, ukusebenza ngombala, yonke into abadwebi nabathwebuli bezithombe abayifundayo kumele futhi ibe yingcweti ngumklami wezithombe.
Nweba ulwazi lwakho
Abaqambi badinga ukwazi yonke into ngedizayini: umlando wayo, ithiyori, kanye nokusebenza okungokoqobo. Umklami omuhle angenza ucwaningo lwakhe, alungiselele imidwebo, futhi asebenzise iphrojekthi.
Umthombo wesithombe: observatory.tec.mx
Lo msebenzi usho ukuthuthuka okuqhubekayo. Nsuku zonke kunezinhlelo zokusebenza ezintsha nemikhiqizo yesoftware edinga ukucaciswa kahle ukuze uhlale usendleleni. Qala ngezisekelo: Adobe I-Photoshop ne-Illustrator, eziyisisekelo, kodwa hhayi kuphela amathuluzi womklami. Njengemboni yezemfashini, kunezitayela zokuklanywa kwezithombe, futhi ukuzilandela ngendlela ephusile nakho kuyakhuthazwa.
Umbhalo, nombhalo owengeziwe
I-typography iyingxenye ethakazelisa kakhulu futhi eyinkimbinkimbi yokuklama. Phela, akuvamile ukuthi isakhiwo sihambe ngaphandle kombhalo, futhi indlela lo mbhalo wethulwa ngayo kumbukeli inquma ukuzuzwa komgomo wokugcina. Kunemithetho nemithetho yayo, okufanele ilandelwe. Ngenhlanhla, kunezincwadi eziningi mayelana ne-typography, futhi ngemva kokuzifunda, ungaqonda yonke into.
Njengakunoma yimuphi omunye umsebenzi wokuklama imidwebo, kukhona okukhethekile. Uma uthola injabulo enkulu ngokucabanga ngobuwena bebhizinisi, futhi unekhono ngempela kukho, gxila kukho. Akuvamile ukuthi abasiki bengqephu abadweba yonke into ngokulandelana bagcine bengenzi lutho kahle.
Umthombo wesithombe: hiring.amazon.com
Uma ukuzifundisa kungekona okwakho
Ngemva kokufunda lesi sihloko, ekugcineni uyaqiniseka ukuthi ukuzifundela akukhona kwakho, futhi ukuze ufeze iphupho lokuba umklami udinga ukuthola imfundo ehlelekile? Ngemuva kwalokho singakuncoma ukuthi ufunde ngokucophelela okunikezwayo emakethe yezinsizakalo zemfundo. Funda izibuyekezo ezingosini, bheka abaphothule ezikoleni ozithandayo. Ulwazi oluqoqwe ndawonye luzokusiza wenze isinqumo.
Umthombo wesithombe: cambridgeinternational.org
Nguwe kuphela onqumayo ukuthi kufanele uye ekolishi noma cha. Khetha indlela yokuzuza amakhono okuklama azisebenzela kangcono wena. Kodwa ukuze uphendule umbuzo othi “Ingabe udinga ukuba neziqu zasekolishi ukuze ube umklami?” – HAYI. Awudingi iziqu zasekolishi ukuze ube umklami.
U-Helen M. Oneil ungumphathi we-PR kanye nomklami wezithombe ochwepheshe oneminyaka engu-8 yesipiliyoni. Wazalelwa edolobheni laseNew York, futhi manje uhlala esifundazweni saseGeorgia. Uma engasebenzi ufunda izincwadi futhi uyadansa i-salsa.
← Akukakakabi yisikhathi sokumisa ukukhangisa kokuphrinta
I-Web to Print Technology Trends 2022 →